Toyota Camry 2017 (#592931) ကို Tachileik မြို့နယ်တွင်ရော... | CarsDB
6627 total views,5today
Lot Number: #592931
Cars DB ***တွင်ကြော်ငြာထားသော ကားဟုစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။တာချီလိတ်တွင် ကားလာရောက် ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါသည်။ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်း နိုင်ပါသည်။
Toyota Camry moble 2017 Bran New Engine Power 2500 Petrol.
Good condition, power steering, power windows, Steering volume control, Air bags, Air con, Back camera, Push start, Smake key, Electric chair.
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) SKMM Auto Car မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Camry 2017 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။